Bhuti remazino, Antimicrobial Toothbrush, Soft Toothbrush - Enyuan
Bhurosi remazino rakapfava
Yakarodzwa sengezi marasha mazino
oem nyoro bristles diki bhurashi musoro wemazino
Couple filament nyoro bristles chikwesheso
zviuru gumi zvebvudzi bhurosi rakapfava designe ...
High polymer tpu bristles chikwesheso anodzivirira t ...
Huaian Enyuan Vashanyi Zvigadzirwa Co, Ltd.
Huai'an Enyuan Yevashanyi Zvigadzirwa Co, Ltd. ikambani inoshanda mukugadzira nekugadzirisa zvigadzirwa zvebrush, kunyanya kusanganisira bhurosi remazino uye mamwe mazana ezvigadzirwa. Main zvigadzirwa: epurasitiki mazino mabhurasho, nyepera mazino mabhurasho, runyoro scrapers, interdental brushes, yemishenjere mazino mabhurasho, nezvimwewo Standardize uye zadzisa mhando manejimendi sisitimu. Iyo fekitori yekambani inovhara nzvimbo inopfuura zviuru mazana mana. Kune vashandi vanopfuura makumi masere.
Musiyano uripo pakati pebvudzi rakaomarara uye rakapfava remusoro webhurosi
Inofananidzwa nemabhurashi akaoma emazino, akapfava bristles mabhurosi emazamu haanyanyo kukuvadza mazino uye akakunda kufarirwa nevatengi vazhinji. Ngatinyatso tarisei musiyano uripo pakati pebhurasho rakapfava uye rakaomarara, uye mashandisiro ekushandisa mabhurasho emazino akapfava. Ndeupi musiyano uripo pakati pebhurosi rakapfavirira re ...
Ungasarudza sei bhurasho revana
Vabereki vazhinji vanokudziridza tsika yevana vavo yekugeza mazino kubva paudiki, saka vana vanofanirwa kukwesha mazino avo riinhi? Nderupi rudzi rwebrashi remazino randinofanira kusarudza? Ndeapi matanho ekuzvidzivirira pakusarudza bhuti rezino revana? Ngatigovanei nhasi: Ungasarudza sei chi ...
Sei kusarudza chikwesheso
Chekutanga pane zvese, kana uchitenga mukombe wekushambidza muromo, iwe unofanirwa kutarisisa kune yakadzama mashandiro ekugadzirwa kwebhurosi rezino, iro rinotsanangurwa mumatanho matatu anotevera. Kutanga, isu tinofanirwa kutarisisa dhizaini dhizaini yebhurosi rezino, senge dhizaini-yakaita dhizaini, inoenderana nemuromo ...
Kero: Kwete 45, Industrial Concentration Zone, Caoyun Town, Huaian Dunhu, Huaian, Jiangsu, China